भिडियो – Hot Post News
समिर सुबेदी – प्रेमको नाटक गरेर एक युबतिलाई काठमाडौका एक युवकले लाखौ रकम ठगेका छन । सबिन श्रेष्ठ नाम गरेका युबकले लाखौं रुपैयाँ पटक पटक गरेर लगेका मात्र हैनन मोरङ बेलबारीकि दिक्ष्या चौधरी नाम गरेकी एक युवतीलाई मायाको नाटक गरेर सुन चादि लगायतका लाखौ धन सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन । गरिब परिवारकि दिक्ष्यालाई पटक पटक माया गर्छु मन पराउछु भनेर बिश्वास दिलाएपछी उनिहरुको बिबाह गर्नेसम्म कुरो पुगिसकेको बताउछिन ती युवती । बिबाह बन्धनमा बाधिने भनेर परिवारसम्म नै कुरा पुगेको थियो । बिहे नै गर्नेसम्मको कुरा भएपछि ढुक्क परेकी युबतीलाइ कहिले बाइक बिग्रीयो कहिले बिरामी भए भन्दै बारम्बार पैसा मागेपछि युबतिले पैसा पठाउदै गएकी थिइन । त्यसैक्रममा ती युबतीका भाइ र भिनाजुलाई पनि बिदेश पठाइदिन्छु भन्दै करिब सात लाख रुपैयाँ लगेको रहेछ । अहिले सम्पर्क बिहिन भएको बताउछिन । बेलबारीका एकजना समाजसेवी लिम्बू दाइका
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३ औँ सागमा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षकहरुलाई नगद पुरस्कारको घोषणा गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा प्रोत्साहनस्वरुप प्रधानमन्त्रीले स्वर्ण, रजत र कास्य पदक विजेता र प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कार राशिको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि मंगलबार नै साग समापन समारोहमा सदस्यसचिव रमेश सिलवालले प्रधानमन्त्रीले विशेष प्याकेज घोषणा गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार एक स्वर्ण विजेतालाई ९ लाख रुपैयाँ नगद दिइने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् भने एकभन्दा बढी स्वर्ण विजेतालाई एघार लाख रुपैयाँका दरले नगद पुरस्कार दिइनेछ । जसमा दुईवटा स्वर्ण विजेताले २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको पुरस्कार राशिअनुसार पौडीमा चार स्वर्ण जित्ने गौरिका सिँहले स्वर्णतर्फबाट ४४ लाख प्राप
मंसिर २५, कपिलबस्तु । कपिलबस्तु गोरुसिंहे भन्ने स्थानमा बुहारीले आफ्नै ससुराको ज्यान लिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । गोरुसिंहेकी लक्ष्मी बोहोरा क्षेत्री पौडेललाई ससुराको ज्या न लिएको अभियोग लगाइएको छ । ससुराको ज्यान लिएर दजैनौं सिरक र ब्याकेंटले छोपेर राखेको अवस्थामा स्थानिय र परिवारका सदस्यले भेटेका थिए । जसले पहिलो पटक वृद्ध बुवालाई मृत देखिन् उनले गरिन् घटनाको बयान । उनी छिमेकी हुन् । वुहारीको ति घरका सदस्यसंग पहिले देखि नै राम्रो सम्बन्ध थिएन । छिमेकीका अनुसार बुहारीले सासु र अमाजुलाई आफ्नो निशाना बनाएकी थिइन् । उनीहरुबीच बेलाबेलामा घर झगडा भइरहन्थ्यो । तर ति बुहारीले सासु र अमाजुलाई हानी पुर्याउने अवसर नपाएपछि ससुरा माथि जाइलागेको हुनसक्ने छिमेकीको भनाई छ । घटना हुनुभन्दा एक दिन अगाडी त्यो घरमा निकै ठूलो झगडा भएको थियो । छिमेकीहरु मिलेर नै घर झगडा साम्य बनाएका थिए ।बाकी हेर्नुहोस भिड
चर्चित नायक बिराज भट्ट यहि माघ २४ मा आफ्नो नउाँ चलचित्र साङलो लिएर दर्शक माँझ आउँदैछन् । मसलेदार चलचित्र साङलोमा बिराज भट्टसँगै निकिता चाण्डक, कामेश्वर चौरासिया, जय नन्द लामा, शिशिर भण्डारी आदि कलाकारहरुको मुख्य भुमिका रहेको छ । चलचित्रको निर्माण तथा निर्देशन पनि बिराज भट्टले नै गरेका हुन् । यसैबिच फिल्मको गीत चरीले काफल टिप्यो चर्चामा रहँदा साङलोको ट्रेलरको प्रतिक्षा दर्शकहरुलाई निकै छ । दर्शकहरुलाई जानकारी दिदै बिराज भट्टले फिल्मको ट्रेलर चाँडै नै दर्शक माँझ आउने बताए । बिराजलाई के तपाई धनगढीको डन हो भनेर प्रश्न गर्दा उनले यस्तो जवाफ दिए, भिडियो हेर्नुस
केही समय यता चर्चाको शिखरमा रहेका अ’घोरी बाबा अहिले पनि चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । गला र कलामा उस्तै दम भएको अ’घोरी बाबा वि’हे गरे पछि विभिन्न कारणले च’र्चामा आएका छन् । भर्खरै मात्र उनको ल’फगां म्युजिक भिडियोको छायांकन हुँदा बाब मख्ख देखिए हेर्नुहोस् भिडियो सहित केही समय यता चर्चाको शिखरमा रहेका अ’घोरी बाबा अहिले पनि चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । गला र कलामा उस्तै दम भएको अ’घोरी बाबा वि’हे गरे पछि विभिन्न कारणले च’र्चामा आएका छन् । भर्खरै मात्र उनको ल’फगां म्युजिक भिडियोको छायांकन हुँदा बाब मख्ख देखिए हेर्नुहोस् भिडियो सहित
काठमाडौं । जापानबाट स्वयंसेवक ट्राफिकको रुपमा नेपाल आएकी आयुमी ओहोसी ‘नेपालीको पारा’ देखेर दंग परेकी छन् । झण्डै ८ महिना पहिले जापानी नियोग जाइकामार्फत काठमाडौं आएर ट्राफिक सेवामा खटिएकी आयुमी जापानी पूर्व प्रहरी समेत हुन् । उनी हालै नेपाली चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ हेर्न सिनेमा हलमा पुगेकी थिइन् ।सो क्रममा मध्यान्तरमा फिल्म रोकेर विश्राम लिएको देखेर उनी दंग परिन् । ‘हाम्रो जापानमा फिल्म हलमा २ घण्टा सरासर फिल्म देखाइन्छ, यहाँ फिल्मको बीचमा ब्रेक लिएको देख्दा अचम्म लाग्यो’, उनले भनेकी छन् । नेपाली खरर.. बोल्ने आयुमीले के के भनिन् ? हेर्नुहोस् भिडियो : ३२ वर्षीय जापानी नागरिक आयुमीले यहाँ आउने बित्तिकै नेपाली नाम समेत राखिसकेकी थिइन् । आफूलाई सुप्रभा लामा भनेर चिनाउने उनी घुम्नका लागि चितवनको सौराहा र पोखरा समेत पुगिन् । उनी अहिले काठमाडौंमा ट्राफिक प्रहरीसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिन
बिचरा ! भाइरल जोडी पूजाले ६ महिनाको बच्चा छोड्नुको कारण यस्तो रहेछ , गह भरी आँशु पार्दै खोलिन बास्तबिकता (भिडियो सहित)
झापा, दमक । इलामको चुलाचुलीमा भेटिएका हजुरवुवा र नातिनीको जस्तो उमेर अन्तर भएका श्रीमान् श्रीमती पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल जोडीका रुपमा परिचित छन् ।चुलाचुली गाउँपालिका ३ का ६७ बर्षीय सिंहप्रसाद लिम्बू र २१ बर्षीया पूजा लिम्बूले विवाह गरेपछि यतिबेला भाइरल बनेका हुन् । शारीरिक रुपमा अंपाङ्ग रहेकी पूजा र बृद्ध अवस्थामा पुगेका सिंहप्रसाद लिम्बूको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । उनको टाउको लुकाउने एउटा गतिलो घरसमेत छैन । साना साना नाति नातिना र वृद्ध मात्रै बस्ने घरमा बिजोक नै थियो भन्छन वृद्ध ।उता युवतीको पनि पहिले नै एकजना युवकसँग बिहे भएको र उसले छाडेर गएपछी बेसाहारा भएकी युवती जसको एउटा हात नै छैन । हात नभएपछि कसैले बिहे नगर्ने र बिहे भएपछी पनि आफुसङ नबस्ने भएपछी उनले वृद्धसंग बिबाह गरेको बताइन ।घरको अवस्था धेरै नै बिजोक रहेको छ । अहिले ६७ बर्षिय बाजेको जेठो छोरा बिरामी भएर बिर अस्पतालमा
अमेरिकाबाट हात हालेर फर्केकी मेघा घिमिरेको कोठामा पुग्दा मेघाले यस्तो गरिरहेको भिडियो भाईरल भएपछि (भिडियो हेर्नुस)
करेन्ट लागेर दुवै हात गुमाएकी मेघा घिमिरेले अमेरिका पुगेर कृत्रिम हात हालेर फर्केकी छिन् । नारायण रिना मेमोरियल फाउण्डेशनले दुर्घटनामा परी दुवै हात गुमाएकी मेघा घिमिरेलाई उपचारका लागि अमेरिका लगेको थियो । हात हालेपछि मेघा निकै खुशी छिन्, कुनै दिन सानो सहयोगका लागि तड्पिरहेका मेघाा र उनको आमाले मिडियामा आईसकेपछि मेघााको हात हाल्नका लागि लाखौं सहयोग पाए । अमेरिका पुगेर ८० लाख भन्दा माथिको हात हालेकी मेघााले बताएकी छिन् । कृत्रिम हातको सहायताले मेघाा हिजोआज आफ्नो काम आफै गर्ने भएकी छिन् । लुगा लाउने, खाना खाने लगायतका काम गर्न उनलाई अब आमाको साथ चाहिदैन । भिडियो हेर्नुस